Antson’ny Mpikatroka Hampitsaharana ny Ady An-trano Naharitra 60 Taona Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2015 6:30 GMT
Sary nozarain'ny Tambajotran'ny Tanoran'i Yangon
Nankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho An'ny Fandriampahalemana tamin'ny 21 Septambra ny vondrona isan-karazany ao Myanmar tamin'ny alalan'ny diabe tao an-drenivohitra teo aloha Yangon, mitaky ny famotsorana ireo gadra politika sy ny famahana ny olan'ny ady an-trano naharitra am-polo taona maro ao amin'ny firenena.
Nanazava ny maha-zava-dehibe ny hampitsaharana ny ady ara-politika mitam-piadiana ao amin'ny firenena ny mpikarakara ny hetsika:
Ao anatin'ny fanantenana ahatongavana amin'ny tena fandriampahalemana ao anatin'ny Firaisantsika saina nanjakan'ny ady an-trano isankarazany nandritra ny 60 taona mahery, hanao diabe ny olom-pirenena sy ny mpianatra tia fihavanana amin'ny Andro Iraisampirenena ho An'ny Fandriampahalemana amin'ny 21 Septambra, hiantsoantso ny teny fanevan'ny Fandriampahaleman'ny firenena.
Ny ahatongavana amin'ny filaminana tena izy dia ny famahana olana tsy ny ady mitam-piadiana ihany fa ny ady ara-politika ihany koa, ary mino izahay fa tsy tokony hanana gadra politika ny firenena. Noho izany, hotakiantsika ny famotsorana ny tsy misy fepetra ny gadra politika rehetra.
Teo ambanin'ny fitondrana jadona miaramila nandritra ny dimampolo taona mahery i Myanmar. Nandritra izany fotoana izany, nihamafy ny ady an-trano teo amin'ny vondro-tafika sy ny mpioko mitam-piadiana ara-poko. Niditra tao anatin'ny tetezamita ara-politika ny firenena tamin'ny 2011 izany mankany amin'ny fametrahana ny fitondrana demaokratika, saingy mbola nanjakan'ny ady mitam-piadiana ao an-toerana sy ny herisetram-piarahamonina izany. Olona eo amin'ny 1,5 tapitrisa nafindra toerana ao anatiny no mbola monina ao anaty toby vonjimaika noho ny ady an-trano maharitra sy ny adin'ny fiarahamonina manerana ny firenena. Araka ny filazan'ny Fikambanana Manampy ny Gadra Gadra Politika (Burma), mbola misy gadra politika 108 any am-ponja, anisan'izany ny mpianatra sasany izay mitaky fanavaozana.
Topazo maso ireo sary sasany tamin'ny diabe izay nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Tambajotran'ny Tanoran'i Yangon sy ny Andro Iraisampirenena Hoan'ny Fandriampahalemana, Myanmar:
Diaben'ny Fandriampahalemana tao Yangon. Sary nozarain'ny Tambajotran'ny Tanoran'i Yangon.
Hoy ny vakin'ny sora-baventy “Ny fananganana firaisana federaly no lalana mankany amin'ny tena fandriampahalemana.” Sary nozarain'ny Tambajotran'ny Tanora Yangon.
Mpikatroka manao kabary nandritra ny diabe tao Yangon. Sary nozarain'ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Fandriampahalemana, Myanmar.
Ny fehezanteny eo amin'ny fitafiana dia mivaky hoe: (Elatra) “Ario ny fitiavan-tenanao sy ny avonavonao.” (Vatana) “Ry namana, fotoana izao hanariana ny fankahalanao.” Sary nozarain'ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Fandriampahalemana, Myanmar.
Hoy ny vakin'ny sora-baventy “Milamina ny firenena manontolo, afaka.” Sary nozarain'ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Fandriampahalemana, Myanmar.